Ukuphupha ngePaki Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nokupaka. Athetha ntoni amaphupha aqhelekileyo? Sikunceda ufumane kwesi sikhokelo.
Ukufumana indawo yokupaka simahla kwisixeko esikhulu kunokuba nzima kwaye kube noxinzelelo. Ukupaka emaphethelweni endlela kuhlala kungavumelekanga, kwaye ukuba kunjalo, izithuthi zihlala zipakwe kufutshane. Ukuba unethamsanqa, kuya kubakho indawo ekhoyo.
Kuyacaphukisa xa omnye umqhubi eza ngaphambili. Akuqhelekanga ukuba iingxabano ezinamandla zivele kwiimeko ezinjalo. Kukho phantse indawo yasimahla kwindawo yokupaka, kodwa iifizi zokupaka zihlala ziphezulu kakhulu. Abanini bemoto abaninzi bayavuya xa benethuba lokusebenzisa igaraji yabo.
Ephupheni lokupaka, umphuphi mhlawumbi ufuna indawo yasimahla. Kodwa ungaphupha ngendawo enkulu enamakhulu eemoto ezimileyo phakathi kwazo ongasenakuzifumana ezakho. Into ebalulekileyo kutoliko lwamaphupha kulapho indawo yokupaka ikhoyo. Ngaba yigaraji, indawo yokupaka okanye indawo evulekileyo?
1 Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba ujonga indawo yokupaka, ufuna ukulugqiba uhambo okanye ubuncinci ume kancinci. Kutoliko lamaphupha, olu phawu lwephupha lubandakanya phumla ukuba umphuphi uzama ukufumana ebomini bakhe. Mhlawumbi uxinzelelo lwabucala okanye lomsebenzi kwaye ngoku ufuna ixesha lokuphumla. Ukuba upaka imoto yakho ngaphandle komqondiso othintelayo, uphawu lokuphupha "lokupaka" lusilumkisa ngokuchasene nokunyanzelisa ukuthanda kwethu ngokuchasene nengqiqo. Ukuba uphupha ukuqhuba kwindawo yokupaka, kufuneka uqale udlule isithintelo. Oku kubonisa umqobo okanye ubuthathaka bobuqu ekutolikeni amaphupha.
Ukuba uphawu lwephupha "ukupaka" lubonakala njengendawo evulekileyo, oku kufanele ukuba kuqondwe kutoliko lwephupha njengesikhumbuzo sokuba bukhali, oko kukuthi, ukubuza imibuzo kwaye ungajongi ngamehlo. Ukuba umphuphi uziva engonelisekanga ngalo mzuzu, indawo yokupaka imbonisa isiphithiphithi esidibanisa nethemba lakhe elizayo. Umphuphi kufuneka oyise ukungazithembi okomzuzwana kunye nokungazithembi.
Ukuba uphupha ukupaka kwigaraji yakho, uphawu lokuphupha "ukupaka" kuthetha ukuphumla kwaye ukhuseleko. Ukutolikwa kwamaphupha, icandelo lodumo likwadlala indima ebalulekileyo, libonisa impumelelo nodumo.
Ukuba ubona ibala leoyile kwindawo yokupaka ephupheni, kuya kufuneka ujongane neenkxalabo zakho, ozibambe ebomini bakho ngenxa yento encinci engabalulekanga.
Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolikwa kwengqondo
Iphupha eliqhelekileyo kukufumana indawo yokupaka ilize. Iphupha lihamba ngendlela efanayo ngaphandle kwamaxesha ngaphandle kokumisa naphi na. Kutoliko lwengqondo ngephupha, olu phawu lwephupha lubonisa ukungoneliseki. Oku kunokuhambelana neemeko zokuhlala zangaphandle okanye ukungonwabi ngaphakathi. Kule meko, uphawu lokuphupha "ukupaka" lunokubonisa umnqweno wobudlelwane obunothando, ekufuneka unike umphuphi ulawulo lokomoya kunye neemvakalelo.
Indawo yokupaka evulekileyo ihlala iluphawu lweziko le psyche ekutolikeni amaphupha. Umphuphi uya kuba ephupheni lokuqonda kwakhe ingaphakathi ekhokelwa kwaye ajongane nobunzima obucinezelweyo. Ukuba indawo yokupaka iyigaraji, uphawu lwephupha lubonisa ubuntu obunesidingo esikhulu sokwenza njalo khu seleko. Ekutolikeni kwengqondo yamaphupha, indawo yokupaka ephantsi komhlaba ikhokelela kubunzulu be-subconscious, apho lonke uloyiko kunye neminqweno ifihliwe.
Uphawu lwephupha «ukupaka» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, indawo yokupaka njengophawu lwephupha imele indawo yengqondo yalowo uphuphayo enokusebenza. Ke ngoko, umphuphi kufuneka alumke ukuba iimpembelelo ezithile zingamtyhaleli emva ukuba kunokwenzeka.